400 प्रशिक्षितलाई जिटीएले दिन्छ त नियुक्ति? उठ्यो माग - खबरम्यागजिन
Homeखबर400 प्रशिक्षितलाई जिटीएले दिन्छ त नियुक्ति? उठ्यो माग
दार्जीलिङ,6दिसम्बर
जिटीए र जिल्ला स्कूल बोर्डले दार्जीलिङ पहाडका 778 वटा प्राथमिक पाठशालामा शीघ्र 652 जनालाई शिक्षककोरूपमा नियुक्ति दिने भनेको छ। ककसलाई दिन्छ, स्पष्ट छैन। यस्तोमा दुइ वर्षे शिक्षक प्रशिक्षण गरिसकेका उम्मेद्वारहरूले नियुक्तिको माग गरेका छन्।
गोर्खा बेरोजगार प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष सुदन गुरुङअनुसार लगभग 400 जना बेरोजगार सदस्यहरूलाई नियुक्ति दिइयोस्। दार्जीलिङ पहाडमा हाल प्राथमिक शिक्षकको लागि आवश्यक पर्ने दुइ वर्षे प्रशिक्षण गरिसकेका लगभग 400 जना सदस्यहरू छन्। जो एनसीटीको नियम पालन गर्न पनि तयार छन्। जसको लागि टेट (टीचर्स एलिजिविलिटी टेस्ट) गर्न पनि उनीहरू तयार छन्।
नियुक्तिको माग गर्दै 2014 देखि गोर्खा बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक सङ्गठन बनाइएको सङ्गठनले लगातार नियुक्तिको माग गरिरहेको छ। तर जिटीएको अत्तोपत्तो दिएको छैन।
‘प्राथमिक शिक्षक हुनको लागि दुइ वर्षे शिक्षण प्रशिक्षणका साथै टेट उत्तीर्ण गरेको हुनपर्छ। तर दार्जीलिङ पहाडमा अहिलेसम्म पनि टेटको प्रावधान छैन। यदि सरकारले दार्जीलिङ पहाडमा पनि यो प्रावधान लागू गर्छ भने गोर्खा बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक सङ्गठनका सम्पूर्ण सदस्य यसको लागि तयार छौं,’ सङ्गठनका कालेबुङ जिल्ला कमिटी अध्यक्ष रोमन भुजेलले भने।